योग्यता – लीलाराज दाहाल | Himal Times
Home सिर्जना योग्यता – लीलाराज दाहाल
योग्यता – लीलाराज दाहाल
लघूकथा – योग्यता
एउटा नव स्थापित कार्यालयको लागि केही कर्मचारी अपुग भएकाले भर्ना गर्ने निर्णय गरी योग्य व्यक्तिहरुबाट दरखास्त आह्वान गरियो । केही प्रशासनिक पदका लागि सूचना निकालियो भने केही कम्प्युटर अपरेटर पदका लागि निवेदन मागिएको थियो ।
लक्ष्मणले पनि बेरोजगारीको दलदलबाट बाहिर निस्कन कम्प्युटर अपरेटर पदमा आवेदन गरे । उनी कम्प्युटर बिज्ञानमा स्नातक थिए । कम्प्युटर जानेका अरु केही युवा युवतीहरुले पनि सोही पदमा आवेदन गरेका थिए । परीक्षाको किसिम प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता भनिएको थियो । परीक्षामा त जीवनमा कहिल्यै कम्प्युटर नछोएका उम्मेदवार पनि सामेल भएका थिए । परीक्षाको नतिजा पनि सार्वजनिक भयो ।
लक्ष्मण लगायत कम्प्युटरका जानकारहरुको नाम निस्किएको थिएन । कहिल्यै कम्प्युटर नछोएका, नजानेकाहरु पो कम्प्युटर अपरेटरको पदमा उत्तीर्ण भएका थिए ।
उनीहरुले हाकिमको कोठामा पुगेर असन्तुष्टी जनाए , “ हामी कसरी अयोग्य भयौं हाकिम साहेव ? हाम्रा प्रमाण–पत्रहरुको ठूलो उपहास भयो तपाईंबाट । ”
अव उनमा लक्ष्मण र यस्ता कयौं योग्य लक्ष्मणहरुको चित्त बुझाउन सक्ने तागत बाँकी थिएन । लाचारीको चश्मा लगाएर कार्यालय प्रमुखले भने ,“ तपाईंहरुको लागि माथिबाट फोन आएन । म के गरूँ ? ” (बागमती ११ , कर्मैया, सर्लाही)
Previous articleधुलिखेल अस्पतालले मृतकका परिवारलाई किरिया खर्च दिने
Next articleपाँच पटकको राष्ट्रिय च्याम्पियन लेआ लेक्सिस चोटको कारण करियरमा ग्रहण लागेपछि बनिन चर्चित पोर्न स्टार
अभिनेत्री साक्षी मलिकले बिकिनी लगाएको तस्वीर सार्वजनिक भएपछि
Himal Times - June 6, 2021
कुवेतबाट १५८ महिला कामदारसहित पहिलो चार्टर उडान नेपाल उड्यो
मलेसियामा काेराेनाकाे कारण मर्नेको सङ्ख्या १ सय ८ पुग्याे
डर: बिरही कान्छा “मिरिक”
मनोज र विनयको “लकडाउनको तिज” ( भिडियो )